Ihowuliseyili siwisa abenzi phezulu manganese sentsimbi intloko hammer yoMvelisi kunye Supplier | Shengde
Bazahluli abavelisi intloko yesinyithi manganese eliphezulu
intloko isando isityumzi edityanisiweyo
Udidi: izincedisi isando isityumzi
Igama kunye negama lokuthengisa: Xiangjian
Inkcazo yamaxabiso: ngamaxabiso obunzima kunye nenkqubo
Izinto eziphambili: intsimbi ephezulu ye-manganese, i-manganese chromium alloy, i-chromium ephezulu (Cr13, Cr20, cr23, Cr26, Cr28, njl.), Isamente khabhayithi
Iinkqubo eziphambili: Ukunyibilikisa isantiate yesodium, kunye nokulahla amagwebu
Izinto ezifanelekileyo: i-granite, i-basalt, i-limestone, ilitye lomlambo, i-cement clinker, i-quartz, i-iron ore, i-bauxite, ityuwa, izitena kunye ne-tile, amalahle, njl.
Ukupakisha kunye nokuhamba: ukuthuthwa kweemoto, ulwandle
ukuthuthwa kunye nokupakishwa kwesakhelo somthi
Zonke izincedisi zingenziwa ngokwezifiso ngokwemizobo kunye neesampuli, kunye neeparameter ezithile kunye neemfuno kunokubonwa ngazo ngokubiza.
Intsimbi ephezulu ye-manganese ine-plasticity elungileyo kunye nefuthe lokuqina. Uluhlu oluqinileyo luveliswa ngaphezulu phantsi kwefuthe lamandla angaphandle. Emva kokuba umaleko womphezulu owomileyo unxityiwe, kuvela umaleko omtsha kwaye uqhubeke nokuba ngumsebenzi onzima.
Ke ngoko, ukuphoswa kwesinyithi se-manganese ephezulu kunendawo yokunxiba ephezulu, kwaye icandelo elingaphakathi lisazigcina iipropathi zoqobo zoomatshini. Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezinempembelelo enkulu.
Intloko yesinyithi se-manganese ephezulu yenziwe ngentsimbi ephezulu ye-manganese ngobungqingqwa obulungileyo, inkqubo elungileyo kunye nexabiso eliphantsi. Olona phawu lubalulekileyo kukuba phantsi kwentshukumo yamandla amakhulu empembelelo, umphezulu wentloko yesando wakha ngokukhawuleza uvelisa umsebenzi, kwaye isalathiso sokuqinisa umsebenzi siphezulu kunezinye izinto, kwaye ubulukhuni buphuculwe kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba amandla eempembelelo awanelanga okanye uxinzelelo loqhakamshelwano lincinci, umphezulu awunakuvelisa umsebenzi uqina ngokukhawuleza, Ukuxhathisa kokunxiba kwensimbi ephezulu ye-manganese akunakudlalwa ngokupheleleyo, okungafaniyo nentsimbi yesiqhelo. Ke ngoko, uxinzelelo lokunxiba lokuchaka kwentloko yesinyithi sesinyithi se-manganese esixhomekeke kwimpembelelo. Nokuba ukhetha inyundo yesinyithi yentsimbi ephezulu ixhomekeke kwimandla otyumkileyo.
Ngenxa yokuba ukuphoswa kwentsimbi ephezulu ye-manganese kunezibonelelo zokuqina okuhle, ukuthembeka okuphezulu kunye nexabiso eliphantsi, uninzi lwezityalo zesamente zisebenzisa ii-liners zebhola ezahlukeneyo; Intloko yesando, ibha yesikrini kunye nepleyiti yokufaka isando isityumzi; Ipleyiti yomhlathi kunye nembasa yokugada yomhlathi wesityumzi somhlathi; Ukuphoswa kwesinyithi okuphezulu kwe-manganese kusetyenziselwa ipleyiti yomhlathi wesithando somlilo.
Okulandelayo: Cone isityumzi banxibe isahlulo kaludaka udonga eqengqelekayo isigaxa isityumzi